International Movie Archives - Page3of7- YTV
Home » Programs » International Movie » Page 3
September 24, 2020 12:44 am
YTV Channel က ဒရာမာကြိုက်တဲ့ ပရိသတ်တွေကိုလည်း ပစ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ စကားကို မကြားချင်လို့ အချစ်ဒရာမာဇာတ်ကားလေး Fall in Love LikeaStar ကို ယူဆောင်လာပါပြီ…. ? အောင်မြင်ကျော်ကြားလူကြိုက်များတဲ့ ဆယ်လီမမကိုချစ်မိတဲ့ […]
September 24, 2020 12:35 am
Animation ဇာတ်ကားလေးတွေမှ ကြည့်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ YTV Channel ရဲ့ပရိသတ်ကြီးအတွက် Wreck-It Ralph… ? ဂိမ်းသူရဲကောင်းတွေလို အချစ်ခံချင်တဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက် သူရဲကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ဂိမ်းထဲကို ဝင်ရောက်ပြီး အခွင့်အရေးပျက်စီးသွားတဲ့အခါ ?‍? ကောင်လေးအနေနဲ့ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေကိုတွေ့ရမလဲ…..? ❓ […]
ဒီအချိန်မှာအကြည့်ချင်ဆုံးက ဟာသဇာတ်လမ်းတွေပဲဆိုတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် YTV Channel မှာလာပါပြီ Furlough ? ကိုယ်ရံတော်ဆိုရင် အမျိုးသားတွေပဲ သိဖူးတွေ့ဖူးတဲ့ ပရိသတ်တွေက အခုတော့ အမေကြီးကိုလည်းစောင့်ရှောက်ရင်း ဘဝရပ်တည်ရေးအတွက် မဖြစ်မနေ ထောင်တာဝန်ခံအဖြစ်လည်းလုပ်ကိုင်နေရတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အကြောင်းကို ကြည့်ရှုရမှာပါ… […]
ဗင်ဒီဇယ်နဲ့အတူ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားကြစို့ကမ္ဘာကြီးပေါ်က လူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုလုံး ကို ဖျက်ဆီးပစ်နိုင်တဲ့ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့က ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဓာတုလက်နက်ကို ပြန်လည်ရှာဖွေတဲ့ စီမံချက်အကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်… ? အတော်ဆုံးဆိုတဲ့ အစိုးရအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရေး အဖွဲ့က အရာရှိတွေတောင် မအောင်မြင်နိုင်တဲ့ ဒီတာဝန်ကို မင်းသားကြီးအောင်မြင်နိုင်ပါ့မလား… […]
? အက်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကိုမှ ကြည့်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် လာပါပြီ Wild Card ? တစ်ကိုယ်တော်သက်တော်စောင့်လုပ်နေတဲ့ လူကြီးတစ်ယောက် ဂန်းစတားတွေရဲ့အဓမ္မပြုကျင့်ခံရတဲ့ကောင်မလေးအတွက် သက်တော်စောင့်လုပ်ပေးဖို့ အကြောင်းဖန်လာတဲ့အခါ… ❓ ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲ…? ကောင်မလေးကို ကယ်တင်နိုင်ပါ့မလား…? ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်… ? The Transporter နဲ့ ပရိသတ်တွေရင်ထဲရောက်နှင့်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ အက်ရှင်မင်းသားကြီး […]
? တစ်ယောက်တည်းမကြည့်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကား…ဒီကာလမှာ အကြည့်သင့်ဆုံးဇာတ်ကား… ? နှလုံးရောဂါအခံရှိသူများ မကြည့်သင့်ပါဘူးလို့တောင် Review တွေ ပေးထားတဲ့ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားကတော့ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးဇာတ်ကားတွေကိုတောင်းဆိုထားတဲ့ ပရိသတ်တွေစိတ်ကြိုက် YTV Channel ကိုရောက်လာပါပြီ… ?‍♀️ ဒီဇာတ်ကားကတော့ သေဆုံးပြီးသားမိခင်ကိုတွေ့ချင်လွန်းလွန်လို့ ဝိဉာည်ခေါ်ရာမှ မကောင်းဆိုးဝါးတစ်ကောင်ဝင်ပူးပြီး ပြဿနာတွေတက်လာတဲ့အခါ… ❓ ဘယ်လိုမူမမှန်တာတွေဖြစ်လာမလဲ…မိသားစုတစ်စုလုံးလွတ်မြောက်နိုင်ပါ့မလား ဆိုတာကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်… […]